Blogger သတင်း | ရွှေမင်းသား
Home » ဘလော့ (ဂ်) ဒေး , သတင်း » Blogger သတင်း
ဒီနေ့ Ideal Technology ၀က်(ဘ်)ဆိုက် ကိုဝင်ကြည့်တော့.......သတင်းလေး တစ်ပုဒ် ကိုသွားတွေ့ တယ်။ စက် တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့ မှာ ကျင်းပမယ်"့ Why do we Blog " ခေါင်းစဉ်နဲ့ The Seminar ofMyanmar Bloggers Society မှာ Ideal Technology လည်း ပါဝင်ကူညီမယ် လို့ ဖတ်မိလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ သတင်းက.....
Ideal Technology is Co Sponsor for the seminar which will be held on 1st September 2007 at Myanmar Info Tech with the title of "Why Do We Blog?"
** Special Discount Programs will be launched on that day.
ပါတဲ့..။ စပါယ်ရှယ် Discount လည်းရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်....။
Labels: ဘလော့ (ဂ်) ဒေး, သတင်း